I-LinkedIn Inweba Ukusebenza Kwekhasi Lenkampani | Martech Zone
NgoLwesibili, Novemba 13, 2018 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 9, i-2021 Douglas Karr
Ngenkathi i-Facebook ishiye kakhulu amakhasi okufinyeleleka ngokwemvelo, kubonakala sengathi i-LinkedIn ithatha ithuba lokusiza amabhizinisi ukuqhuba ukuzibandakanya kwezenhlalo ngokufaka ezinye izici ezinhle emakhasini wephrofayili yenkampani.
Imiphakathi ingumongo empumelelweni yawo wonke amabhizinisi. Abasebenzi, ophathina, amakhasimende kanye nalabo abafuna umsebenzi bakha umphakathi, futhi ngokubambisana, bangasiza ukuqhuba ukukhula kwenkampani yakho ngezingxoxo ezizwakalayo. USparsh Agarwal, Umholi Womkhiqizo, Amakhasi we-LinkedIn
Namuhla, i-LinkedIn imemezele i-LinkedIn Amakhasi - isizukulwane esilandelayo se- Amakhasi Ehlanganisiwe Enkampani. Amakhasi akhe kabusha kusuka phansi ukuze kube lula ngemikhiqizo, izikhungo nezinhlangano, kusuka kumabhizinisi amancane kuya kumabhizinisi amakhulu, ukukhuthaza izingxoxo ezakhayo nomphakathi we-LinkedIn onamalungu angaphezu kwezigidi ezingama-590.
I-LinkedIn ikhiqiza okungaphezulu kwezigidi ezi-2 zokuthunyelwe, amavidiyo, nama-athikili kokuphakelayo ngosuku, futhi lokhu kusebenzisana kukhula kuphela. Okuhlangenwe nakho kwabo okusha kwamakhasi kwakhelwe ukukhuthaza imiphakathi esebenzayo nezingxoxo ku-LinkedIn nabasebenzi benkampani, amakhasimende, nabalandeli.
Amakhasi enzelwe ukusiza izinhlangano ukuthi zixhumane namalungu, zikhulise ibhizinisi labo futhi zakhe ukuxhumana okuhlala njalo. Ukufeza le nhloso, amakhasi akhiwe phezu kwezinsika ezintathu ezibalulekile:
Joyina izingxoxo ezibalulekile - Izimenenja zomphakathi, ezaziwa nangokuthi ama-admin, zingumgogodla wecebo lomphakathi lenhlangano. Amakhasi abanika amathuluzi abawadingayo ukukhuthaza ukuxhumana kwansuku zonke nomphakathi wabo. Abaphathi manje sebengathumela izibuyekezo futhi baphendule imibono, usohambeni kusuka kuhlelo lokusebenza leselula le-LinkedIn le-iOS ne-Android. Abaphathi bangaphinda bahlobanise ikhasi labo nama-hashtag, ukuze balalele futhi baphendule izingxoxo ezenzeka ngomkhiqizo wabo noma ngezihloko ezifanele ku-LinkedIn. Ngaphezu kwalokho, ngenkathi abaphathi bebehlale benekhono lokuthumela izithombe, ividiyo yomdabu kanye nokubhala kumakhasi abo e-LinkedIn Company, manje sebengabelana ngemibhalo, njengezethulo zePowerPoint, iZwi Imibhalo nama-PDF ukuxoxa izindaba zomkhiqizo ezicebile nezicindezelayo.
Yazi futhi Ukhulise Izithameli zakho - Enye yezinselelo ezinkulu zama-admins ukwazi ukuthi hlobo luni lokuqukethwe oluzokwengeza inani lomphakathi wabo, ngaphandle kwalokho okuthunyelwe kwabo kungawa phansi. Sakhe Iziphakamiso Zokuqukethwe, isici esisha esiveza izihloko nokuqukethwe okuthrendayo nezithameli eziqonde kubo ku-LinkedIn. Ngalokhu kuqonda, ama-admins manje anganemba futhi enze okuqukethwe izethameli zabo nakanjani okuzozibandakanya nabo.Abaqashi bangathatha uphawu lwabo lwethalente balibeke ezingeni elilandelayo nge-Career Pages, okunikeza ithuba lokubandakanya ithalente lamanje nelikhona ngethebhu ye-Life kanye Ithebhu yemisebenzi, enikeza ukubukeka okwenziwe ngokwezifiso enkambisweni yenkampani yakho, imisebenzi nokuthi kunjani ukusebenza enkampanini yakho.
Bandakanya abantu bakho - Abasebenzi benkampani bayimpahla yabo enkulu futhi bangaba ngabameli babo abakhulu. Ukukhulisa amazwi abo kungasiza izinhlangano zakhe ukuxhumana okuqinile nezithameli zazo. Sijabule ukumemezela uhlu lwamathuluzi okusiza izinhlangano ukuthi zihlanganyele nabantu bazo ngokwethula ikhono lokuthola nokwabelana kabusha ngokuthunyelwe komphakathi kwabasebenzi babo be-LinkedIn ekhasini labo. Siphinde sikhiphe ikhono lokuphendula futhi sabelane kabusha ngokuthunyelwe ku-LinkedIn lapho kukhonjiswa khona Ikhasi lenkampani, njengobufakazi bamakhasimende nokubuyekezwa komkhiqizo. Lokhu kuvumela izinkampani ukuthi zibonise izingxoxo abantu abanazo ngazo, futhi zingasiza umkhiqizo wazo ugqame ngaphezu kwesixuku.
Finyelela Amakhasi kusuka kumathuluzi wakho owathandayo
I-LinkedIn ithuthukise ama-API abalingani bayo ukwenza kube lula ngama-admins ukuthi ahlanganyele ezingxoxweni ku-LinkedIn nge-API. Isibonelo, ngokuhlanganiswa komkhiqizo neHootsuite, abalawuli manje sebengathola izaziso ngaphakathi kweHootsuite lapho kunomsebenzi ekhasini labo le-LinkedIn.
Ngabasebenzisi abangochwepheshe abangaphezu kwezigidi ezingama-590, i-LinkedIn iyindawo kaNdunankulu yemikhiqizo yokuxhumana namakhasimende, abasebenzi namathemba. Sijabule kakhulu ukuba yisisombululo sokuqala sokuphathwa kwemidiya yezenhlalo ukwakha i-API Yezaziso entsha ye-LinkedIn ukuze amakhasimende ethu akwazi ukuqhuba ngempumelelo ukubandakanyeka ku-LinkedIn. URyan Holmes, isikhulu esiphezulu seHootsuite noMsunguli
I-LinkedIn nayo isebenzisane nayo I-Crunchbase ukufaka imininingwane yezimali kanye nabatshalizimali abaphambili kuma-LinkedIn Amakhasi, okunikeza amalungu e-LinkedIn ukuqonda okuningiliziwe kwephrofayili yebhizinisi yenkampani.
Ukuze ufunde kabanzi ngamakhasi e-LinkedIn nokuthi ungawenza kanjani asebenzele inhlangano yakho, sicela uvakashele lapha. I-LinkedIn isiqalile ukukhipha ulwazi olusha lwamakhasi e-US futhi izokwenza ukuthi itholakale kuwo wonke amabhizinisi emhlabeni jikelele emasontweni azayo.
Tags: LinkedInamakhasi ezinkampani ezihlanganisiweIphrofayili yenkampani ye-linkedinamakhasi ezinkampani ezihlanganisiweamakhasi we-linkedin